Mutemo wemhuri | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: Mutemo wemhuri
Ndezvipi basa rekuongorora vechidiki maererano nevechiri kuyaruka?
Nderipi basa remuongorori wezvevechidiki maererano nemukomana akanyoreswa? Muhupenyu, zvinoitika kuti vabereki chete ndivo vanorova. Uye taura uye nyora maminetsi. Basa remuongorori rinotarisirwa ...
Nzira yekuziva kuti haigoni
Maitiro ekuzivisa kusakwanisa "Maitiro" akareba. 1. Kuenda kucourt. 2. Psychiatric bvunzo (inpatient kana outpatient) 3. Kugamuchirwa kwemutongo wedare (kubvumidzwa sekusakwanisa kana kuramba kuzivisa kusagadzikana) Kazhinji ...
Nzira yekunyora kuda kwe alimony.
Maitiro ekunyorera chirevo chekukumbira kuriritira. Iyo fomu uye zvinodikanwa zvechirevo chekudai zvinopihwa muArt. 131 yeCivil Procedure Code yeRussian Federation; Unofanirwa kuratidza: 1) zita redare rinoendeswa chikumbiro; ...
Nzira yekuziva sei kana munhu akaroorwa kana kwete?
Unoziva sei kuti munhu akaroora kana kuti haana? rimwe chete tafura yeruzivo - HAPANA, asi zvakakodzera kuenda kuhofisi yekurejista iri padhuze nepasipoti - ivo vachakufonera uye vachakuudza ...
mwana kutsigira pasina kurambana
Ini ndakangoisa mari yekuriritira yemwana asina kurambana kuna mejasitiriti, asi kana pasina gakava pamusoro pekugara kwemwana, dare rinenge riri kudivi rako 1. Hapana munhu anokurambidza kuisa ...
Nzira yekuisa sei munhu anorwara mupfungwa muchipatara?
kuisa sei munhu anorwara nepfungwa muchipatara? 1.kana nedare mutongo 2. kana nemvumo yake. Zvinoenderana neMutemo weRussian Federation "Pfungwa dzepfungwa uye vimbiso yekodzero dzevagari mune yayo ...
h.1 Art.157 UK RF Kuzvidzivirira kunonyadzisira kweanmony.
Chikamu 1 cheChinyorwa 157 cheCriminal Code yeRussia Federation Kutya kwakaipa kwesmony. Mumakore gumi kusvika gumi nemashanu, pamwe mwana wako anoenda kunotora basa rine mukurumbira munzvimbo inoremekedzwa yenyika, uye panguva yekutarisa kwakakosha kunoitika kuti baba vari mukutongwa ... ...
Chii chiri UFC?
Chii chinonzi UFC? Ichi chinonhuwira Federal Treasure (Treasure yeRussia) yemubatanidzwa Executive body (federal sevhisi), iyo, zvinoenderana nemutemo weRussian Federation, inoita mabasa ekusimbisa emutemo kuverengera kuitiswa kwebhajeti remubatanidzwa, mari ...
Taura, pasi pemamiriro api ayo baba vanogona kubata mwana kubva kuna amai panguva yekurambana?
Ndiudze, pasi pemamiriro api baba pavanogona kumhan'arira mwana kubva kuna mai kana paine kurambana? Kana chinzvimbo chake chakanyanya kunaka mumaonero edare. Zvese zvinhu zviri kuzviisa pasi !!! Muchokwadi, iyo mikana inowedzera zvakanyanya kana iwe ukakurumidza kutora ...
Alimony yakaverengwa kubva muhomwe yezere kana yakatova nemutero?
Alimony inodonhedzwa kubva kuzere muhoro kana yakatobatiswa mutero? Uye iyo alimony inobviswa zvakare kubva kumubairo? Semuenzaniso, muhoro zviuru gumi nezvishanu, zvemari inobviswa 15%. Uye chete ipapo mutero unoverengerwa ...
Pachikonzero cheChitsauko 69, RF CC inogona kuraswa kusununguka mumatare, uye ndeapi magwaro anodiwa?
Pahwaro hweChitsauko 69 cheRF IC, zvinokwanisika kubvisa kubaba mudare, asi ndeapi magwaro anodikanwa? Chitupa chekuzvarwa, pasipoti uye zvinyorwa zvinoratidza kuda kwako. Chinyorwa 69. Kubviswa ...
Batsira chinyorwa! Nzira yekunyora tsanangudzo yemubereki wemwana ari kuenda kuchikoro chekorogi.
ndibatsireiwo! Maitiro ekunyorera tsananguro yemubereki wemwana ari kuenda kukireshi. "Hunhu" ishoko pacharo (rakanyorwa pakati pepepa) Mukona yekurudyi, unofanirwa kunyora fomu, sekudikanwa muD / s Saka uye nyora ...
Nzira yekuwana mari yepensheni yehama yakafa?
Nzira yekuwana sei mari yepenjeni yehama yakafa? sei kutora mudyandigere wababa vakafa musangano risingabatsiri rehurumende risiri rehurumende pension fund atomgarant imarii inobhadharwa kune akafa akabhadharwa kana iye akazvarwa muna 1974 uye akafa muna 2012 ...
Ndezvipi zvikonzero zvinogona kubvisa kodzero dzekuberekwa?
Ndezvipi zvikonzero zvavanogona kubvisirwa kodzero dzavo dzehukama? Art. 69 SK RF- Vabereki / mumwe wavo / anogona kutorerwa kodzero dzevabereki kana iye: achinzvenga mabasa evabereki, kusanganisira kana ...
mushure mekufa kweumwe wevakaroorana vanowana dzimba? mudzimai nevana. kana pakutanga kwemukadzi, uye shure kwekufa kwake kwave kutove
mushure mekufa kweumwe wevakaroora, ndiani anogara nhaka yeimba? mudzimai, murume nevana. kana pakutanga kwemukadzi, murume, uye mushure mekufa kwake, vana, murume kana mukadzi, vabereki vemushakabvu vatove vana.
Nzira yekupikira mhinduro kumashoko ekuzviti iwe pachako?
Ungagadzirira sei mhinduro kune chirevo chekuzvibvunza iwe pachako? uku kunodaidzwa kuti kuongorora. ... nyora kuzita remutongi mune nyaya yacho, ratidza mumhan'ari, mumhan'ari, wobva wataura yako ...
Ndingakwanisa here kuchinja mazita angu emusikana musikana mushure mekurambana? uye ndezvipi zvinyorwa zvekushandisa?
Ini ndinogona kuchinja zita rangu remusikana zita regore mushure mekurambana? uye nemagwaro api ekunyorera? Unogona! Kutanga, bata hofisi yekunyoresa, ipapo - kumutumbi wenharaunda weFMS weRussian Federation ...
Ndezvipi zvinyorwa zvinodiwa kuti zvinyorwe kuchengetedza?
Ndeapi magwaro anodikanwa ekunyoreswa kwekuchengetwa? Mazhinji. Iwe unofanirwa kuenda kunochengetedza uye ikoko iwe unozopihwa rondedzero, kupihwa zvikumbiro kune mamwe masangano uye kupihwa kutumirwa kwekupasa iyo med. rubatsiro. ...
Vabereki vokurera vanobhadhara zvakadii kumwana? ... Mari yekubhadhara uye mabhenefiti kune mwana wekurera
Vabereki vokurera vanobhadhara zvakadii kumwana?
Kana iwe uchirambana unofanira kunge uchinyora kushandiswa kweimba? Uye iwe unogona kuzviita gare gare, mushure mekurambana? Kwenguva yakareba sei?
Iwe unofanirwa kufaira kupatsanurwa kwemidziyo nekukasira mamiriro ekurambana? Unogona kuzviita gare gare, mushure mekurambana? Zvinotora nguva yakareba sei? Iyo yekuganhurirwa nguva yekukamurwa kwepfuma pakati peyaimbo ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,554 masekondi.